Xinhua Myanmar - ကုန်သည် စက်မှုအသင်းချုပ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပွဲ ကျင်းပ၊ ရလာဒ်ကောင်းများ ဆက်ထိန်းထားရန် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂုလ် မှာကြား
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားစဉ်။ Politics, Law & Military
“ဒီရလဒ်ဟာ ယခင်နှစ်ရမှတ် ၄၃ . ၅ ထက် ပျမ်းမျှ ရမှတ် ၃ . ၃ တိုးတက်ရရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ရရှိတဲ့ အဆင့် (၁၇၁) မှ အဆင့် (၆)ဆင့် တိုးတက် လာခဲ့ ပါတယ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဖို့ လွယ်ကူအောင် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှှုများ ဆောင်ရွက်ရာမှာ တိုးတက်မှု အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ ၂၀ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ထူးခြားတဲ့ အောင်မြင်မှု ရလဒ် ကောင်းတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့ အတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ငါးရပ်မှာ သိသာတဲ့တိုးတက်မှုတွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအောင်မြင်မှုဟာ အစိုးရနဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ ရလဒ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်” ဟု နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမှတ်တရ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြစဉ်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ကြွရောက်လာစဉ်။
ကုန်သည် စက်မှု အသင်းချုပ် ရာပြည့်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပစဉ်။
ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း အမှာစကား ပြောကြားစဉ်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အခြေခံခိုင်မာသော၊ တန်းတူမျှတသော၊ ရေရှည် တည်တံ့သော၊ ကဏ္ဍ အားလုံး ပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မဟာဗျူဟာ ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း ၂၀၁၈-၂၀၃၀ (MSDP: _ Myanmar Sustainable Development Plan 2018-2030)ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ UMFCCI အနေဖြင့် အသေးစား၊ အငယ်စား၊ အလတ် စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရေးနှင့် မြန်မာ ၄ . ၀ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ရေးများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရ သည့် အတွက် များစွာ ကျေနပ်မိပါကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်း၌ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား အသင်းချုပ်က ဦးဆောင်လျက် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍအကြား ပေါင်းကူး တံတားသဖွယ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်မှ စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် MoU များ ရေးထိုးပြီး နိုင်ငံအလိုက် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဒေသတွင်း စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု များအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ နှစ်တစ်ရာတိုင် ရှည်ကြာခဲ့ပြီး ခေတ် စနစ် အခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီစွာ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသော ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်သည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် တိုးတက် အောင်မြင်နေဦး မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနားသို့နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အတူ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဒုတိယ နာယက ဦးထွန်းထွန်းဟိန်၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များမှ ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် ဝန်ကြီးများ၊ အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကြည်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အရာရှိ အရာခံများ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ညီနောင်အသင်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ သည်။(Xinhua)
Previous Article စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၌ တရားမဝင်သစ်တန်ချိန် ၉,၀၀၀ ကျော် သိမ်းဆည်းရမိ
Next Article နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်